Dhisida Sheeko Sheeko: 7da Rajo ee Rabitaankaagu Meheraddaadu Ku Xidhan Tahay | Martech Zone
Qiyaastii bil ka hor, waxaan helay inaan kaqeyb galo kulanka fikirka suuq geynta macmiilka. Waxay ahayd mid fantastik ah, la shaqeynta latalin caan ku ah horumarinta khariidadaha waddooyinka ee shirkadaha tikniyoolajiyadda sare. Maaddaama khariidadaha la horumarinayo, waxaan la dhacay waddooyinka gaarka ah iyo kuwa lagu kala duwan yahay ee kooxdu la timid. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale go'aansaday inaan sii wado kooxda inay diirada saarto suuqa bartilmaameedka.
Cusbooneysiintu waa istiraatiijiyad muhiim u ah warshado badan maanta, laakiin ma noqon karto mid macaamiisha wax u dhinta. Shirkado aan la rumaysan karin oo leh xalal caqli gal ah ayaa fashilmay sannadihii la soo dhaafay sababtoo ah waxay goor hore u yimaadeen suuqa, ama waxay quudiyaan rabitaan aan weli jirin. Labaduba waxay qeexi karaan halaag - dalabku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah wax soo saar kasta ama adeeg kasta oo guuleysta.
Markii la ii soo diray nuqul ka mid ah Dhisida Sheeko Sheeko, Waxaa qoray Donald Miller, si daacadnimo ah uma aanan faraxsanayn inaan akhriyo sidaa darteed waxay ku fadhiisatay buugyarahayga illaa dhowaan. Waxaan u maleynayay inay noqoneyso riix kale sheeko iyo sida ay u badali karto shirkadaada… laakiin maahan. Xaqiiqdii, buuggu wuxuu ku furmay "Kani maahan buug ka hadlaya sheekada shirkaddaada." Haye!
Ma doonayo inaan ka tanaasulo buugga oo dhan, waa akhrin deg deg ah oo macluumaad leh oo aan si weyn ugu talin lahaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira liis muhiim ah oo aan doonayo inaan la wadaago - xulashada a rabitaan khuseeya badbaadada astaantaada.
Toddoba Rajo Rajo Badbaadada Sumaddaadu Waxay Kuxiran Tahay:
Ilaalinta ilaha dhaqaalaha - Ma waxaad badbaadinaysaa lacagta macmiilkaaga?
Ilaalinta waqtiga - Wax soo saarkaaga ama adeegyadu macaamiishaada ma siin doonaan waqti dheeri ah oo ay kaga shaqeeyaan waxyaalaha muhiimka ah?
Dhisida shabakadaha bulshada - Alaabtaada ama adeegyadu miyay kobciyaan rabitaanka macaamiishaadu inay ku xirnaato?
Heerka helida - Ma iibinaysaa wax soo saar ama adeeg ka caawinaya macmiilkaaga inuu gaaro awood, sharaf, iyo turxaan bixin?
Xog uruurinta - Bixinta wax soo saar korodhay, dakhli, ama qashinka oo yaraaday waxay siisaa fursado ganacsiyada inay ku kobcaan.
Rabitaanka dabiiciga ah ee deeqsinimada - Aadamaha oo dhami waxay leeyihiin himilo abuur ah oo deeqsi ah.
Rabitaanka macnaha - Fursadda ay u leeyihiin macaamiishaadu inay ka qaybgalaan wax iyaga ka weyn.
Sida qoraaga Donald Miller wuxuu leeyahay:
Hadafka loogu talagalay calaamadeyntayadu waa inay noqotaa in macaamil kasta oo suurtagal ah uu si sax ah u yaqaanno halka aan dooneyno inaan u qaadno.
Rabitaankee ayaad ku soo jiidanaysaa astaantaada?
Ku Saabsan Dhisida Sheeko Sheeko
Nidaamka StoryBrand waa xalka la xaqiijiyay ee hogaamiyaasha ganacsatada halganka la kulma markay ka hadlayaan ganacsiyadooda. Habkan kacaan ee ku xirnaanshaha macaamiisha wuxuu akhristayaasha siiyaa faa iidada ugu dambeysa ee tartanka, isagoo kashifaya sirta ka caawineysa macaamiishooda inay fahmaan faa'iidooyinka ku qasbaya isticmaalka alaabtooda, fikradahooda, ama adeegyadooda.
Dhisida SheekoBrand Tani waxay ku dhacdaa iyadoo akhristayaasha la baro toddobada sheeko ee caalamiga ah ee bini'aadamka oo dhan ay ka jawaabaan; sababta dhabta ah ee macaamiisha ay wax u iibsadaan; sida loo fududeeyo farriinta sumadda si dadku u fahmaan; iyo sida loo abuuro farriimaha ugu wax ku oolka badan ee bogagga internetka, buug-yaraha, iyo warbaahinta bulshada.
Haddii aad tahay agaasimaha suuqgeynta ee balaayiin doolar shirkad, milkiilaha meherad yar, siyaasi u ordaya xafiis, ama hoggaamiye heesaha kooxda muusikada, Dhisida SheekoBrand waligiis wuu beddeli doonaa habka aad uga hadasho cidda aad tahay, waxaad qabato, iyo qiimaha gaarka ah ee aad u keento macaamiishaada.
Shaacinta: Anigu waxaan ahay shirkad Amazon ah oo waxaan u isticmaalaa xiriiriyeyaasha si aan ugu iibsado buugga qoraalkan.
Tags: brandbrandingekspertendhisida sheeko sheekosheeko macmiilrabitaanmiller donaldKordhinta Iibkasheeko sheeko